Energy Drink – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တီဗီကွောငွာတှမှော အားဖွညျ့အခြိုရညျသောကျပွီး လနျးဆနျးသှားတာ မွငျဘူးကွမှာပါ။ဒီကွောငွာတှအေတိုငျး အပွငျမှာရော တဈကယျဖွဈပါသလား?အားဖွညျ့ အခြိုရညျ သောကျရငျး ဘာတှပေါသလဲဆိုတာ တှေးမိဘူးပါသလား? တကယျတော့ အားဖွညျ့အခြိုရညျ ( Energy Drink) မှာ အဓိကပါတာက
Caffein လို့ချေါတဲ့ လူကိုတကျကွှလနျးဆနျးစတေဲ့ ကဖိနျးဓာတျ
Amino acid အမြိုးနှယျဝငျ Taurine ဓာတျ
Vitamin B အုပျစုဝငျတှပေါတတျပါတယျ။
Energy Drink တှဟော သောကျဖို့သငျ့တျောရဲ့လား?
ကလေးငယျတှအေတှကျဆိုရငျတော့ သောကျဖို့ သိပျမသငျ့တျောတဲ့အထဲပါပါတယျ။ကလေးတှအေတှကျ ဆို အခြိုရညျထကျစာရငျ ကွီးထှားမှု၊ ဖှံ့ဖွိုးမှုအတှကျအဓိကလိုအပျတဲ့ အသားဓာတျ၊ ကစီဓာတျ၊ ဗီတာမငျ မြှတအောငျကြှေးတာက အမြားကွီးပိုကောငျးပါတယျ။ အားဖွညျ့အခြိုရညျတှဟော သှေးပေါငျခြိနျတကျစသေလို၊ အိပျခငျြစိတျနညျးစတောမို့ ကလေးတှအေနနေဲ့ခံနိုငျရညျမရှိတတျပါဘူး။
လူကွီးတှအေနနေဲ့ သောကျမယျဆိုရငျတော့ နှုံးနတေဲ့ အခြိနျမှာ လနျးဆနျးစမှောတအေ့မှနျပါဘဲ။အတနျအသငျ့သောကျသုံးခွငျးကတော့ ဘေးမဖွဈစပေါဘူး။သောကျတာမြားမယျဆိုရငျတော့ အားဖွညျ့အခြိုရညျမှာပါတဲ့
Caffein ဓာတျအရမျးမြားသှားမှာမို့ လကျတုနျတာ၊ ရငျတုနျတာ ဖွဈစပေါတယျ။
ရုတျတရကျ မသောကျပဲနရေငျတောငျ အရငျက အမြားကွီးသောကျထားတာမို့မသောကျတဲ့အခြိနျမှာ ခေါငျးကိုကျတာ၊ အာရုံစူးစိုကျမရတာ၊ မောပနျးနှယျနယျနတောတှဖွေဈစပေါတယျ။
အရာရာဟာ “တနျဆေး လှနျဘေး”ပဲမို့ ဒါလေးတှသေိထားပွီး ဆငျခွငျသောကျသုံးကွပါလို့။
တီဗီကြောငြာတွေမှာ အားဖြည့်အချိုရည်သောက်ပြီး လန်းဆန်းသွားတာ မြင်ဘူးကြမှာပါ။ဒီကြောငြာတွေအတိုင်း အပြင်မှာရော တစ်ကယ်ဖြစ်ပါသလား?အားဖြည့် အချိုရည် သောက်ရင်း ဘာတွေပါသလဲဆိုတာ တွေးမိဘူးပါသလား? တကယ်တော့ အားဖြည့်အချိုရည် ( Energy Drink) မှာ အဓိကပါတာက
Caffein လို့ခေါ်တဲ့ လူကိုတက်ကြွလန်းဆန်းစေတဲ့ ကဖိန်းဓာတ်
Amino acid အမျိုးနွယ်ဝင် Taurine ဓာတ်
Vitamin B အုပ်စုဝင်တွေပါတတ်ပါတယ်။
Energy Drink တွေဟာ သောက်ဖို့သင့်တော်ရဲ့လား?
ကလေးငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ သောက်ဖို့ သိပ်မသင့်တော်တဲ့အထဲပါပါတယ်။ကလေးတွေအတွက် ဆို အချိုရည်ထက်စာရင် ကြီးထွားမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့ အသားဓာတ်၊ ကစီဓာတ်၊ ဗီတာမင် မျှတအောင်ကျွေးတာက အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။ အားဖြည့်အချိုရည်တွေဟာ သွေးပေါင်ချိန်တက်စေသလို၊ အိပ်ချင်စိတ်နည်းစေတာမို့ ကလေးတွေအနေနဲ့ခံနိုင်ရည်မရှိတတ်ပါဘူး။
လူကြီးတွေအနေနဲ့ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ နှုံးနေတဲ့ အချိန်မှာ လန်းဆန်းစေမှာတေ့အမှန်ပါဘဲ။အတန်အသင့်သောက်သုံးခြင်းကတော့ ဘေးမဖြစ်စေပါဘူး။သောက်တာများမယ်ဆိုရင်တော့ အားဖြည့်အချိုရည်မှာပါတဲ့
Caffein ဓာတ်အရမ်းများသွားမှာမို့ လက်တုန်တာ၊ ရင်တုန်တာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ရုတ်တရက် မသောက်ပဲနေရင်တောင် အရင်က အများကြီးသောက်ထားတာမို့မသောက်တဲ့အချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်တာ၊ အာရုံစူးစိုက်မရတာ၊ မောပန်းနွယ်နယ်နေတာတွေဖြစ်စေပါတယ်။
အရာရာဟာ “တန်ဆေး လွန်ဘေး”ပဲမို့ ဒါလေးတွေသိထားပြီး ဆင်ခြင်သောက်သုံးကြပါလို့။